Jonathan Moyo working with MDC Mutambara to stop new Speaker | The Zimbabwe Daily
Jonathan Moyo working with MDC Mutambara to stop new Speaker
Sources said the petition to the high court was made in Moyo’s name, but that the Mutambara formation had collaborated closely in its preparation.Sources said top Mutambara-formation officials met with Moyo for two days in Kadoma recently and resolved to back President Mugabe if he introduces a supplementary budget.
Meanwhile the Zimbabwean regime is keeping up pressure on members of parliament of the Movement for Democratic Change formation led by Morgan Tsvangirai, which secured the position of house speaker when parliament reconvened last month, MDC sources said.
They said Judith Jembere was picked up early in the morning and released only after attorney Alec Muchadehama, a lawyer for the party, intervened.Eliah Jembere was arrested on charges of rape just before he was to be sworn in on August 25.
Two other members – Pearson Mungofa of Harare’s Highfield East constituency and Bednoc Nyaunde of Bindura South, Mashonaland Central province, also remained in police custody after the state opposed their being granted bail last week. Mungofa is charged with causing public violence, Nyaunde with causing disaffection among the military.
MDC lawyer Muchadehama told reporters that Monday’s detention of Judith Jembere was intended to boost pressure on Jembere and the other MDC members facing charges, and the MDC in general.